संविधान बनेपछि पहिलो पटक अध्यायदेशबाट आज ४ बजे बजेट आउदै - खाडी न्युज
May 29, 2021 Budget, news, Politics, नेपाल, बजेट, सरकार
कामचलाउमा परिणत भएको सरकारले शनिवार अपरान्ह आगामी आर्थिक वर्षकोलागि बजेट ल्याउँदै छ। शनिवार दिउसो चार बजे अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्ने छन्।
सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बजेट प्रस्तुत हुने कार्यक्रम रहेको अर्थ मन्त्रालयकला प्रवक्ता महेश आचार्यले जनकारी दिए।
सरकारले संघीय संञ्तित कोष तथा अन्य सरकारी कोषबाट वार्षिक बजेट अनुरूप मात्रै खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ। सोही व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजान भन्दै संविधानले नै बजेट सम्बन्धी व्यवस्था समेत गरेको छ। नेपालको संबिधानको धारा ११९ मा बजेट सम्बन्धी व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था बमोजिम नेपालको बजेट सार्बजनिक हुने परम्परा छ। संविधानले बजेट सबैभन्दा पहिले जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधित्व हुने सभामा प्रस्तुत गर्नु पर्ने भनेको छ। तर यस पटक दुर्भाग्यवश बहुमतको सरकार भएपनि बजेट प्रस्तुत हुने बेलामा भने मुलुक संसद विहीन हुन पुगेको छ। संसद विहीन भएकै कारण यस पटक बजेट नियमित प्रक्रिया मार्फत नभई अध्यादेश मार्फत ल्याउने तयारी सरकारको छ।
हुन त यस अघि पनि मुलुकमा पटक पटक अध्यादेश मार्फत बजेट आएका प्रशस्त उदाहरण छन्। तर नेपालले नयाँ संविधान प्राप्त गरेपछि भने यो नै पहिलो अध्यादेशबाट आउने बजेट हुने छ। यस अघि आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा अध्यादेश मार्फत बजेट आएको थियो। उक्त वर्ष संविधान निर्माण हुन नसकेकै कारण संसद विघटन भएको थियो। जसका कारण मन्त्रिपरिषद मार्फत मुलुक अघि बढेको बेलामा खिलराज रेग्मीको पालमा अध्यादेश मार्फत बजेट आएको हो। संविधान आए लगत्तै बजेट ल्याउने अर्थ मन्त्री पनि विष्णु प्रसाद पौडेल नै रहेका थिए। उनले नयाँ संविधान आएपछि पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए भने उनै विष्णु प्रसाद पौडेलले पुन: बजेट प्रस्तुत गर्दै छन्। तर यस पटक भने उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिहदरबारबाट बजेट प्रस्तुत गर्ने छन्।
त्यस बेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा भने निकै ठुलो अन्तर रहेको छ। यति बेला भने बहुमत प्राप्त पार्टीकै सरकार भएको र पार्टी बिचको अन्तर कलहले संसद विघटनको स्थिति ल्याइ पुर्‍याएको छ। जसले गर्दा पनि बजेट अध्यादेश मार्फत आउने भएको हो। यस भन्दा अघि २०५२, २०५९, २०६०, २०६१, २०६२, २०६७ र २०६९ मा समेत अध्यादेश मार्फत नै बजेट आएका हुन्।
नेपालमा वि.सं. २००८ सालदेखि बजेट प्रणालीको सुरुवात भएको हो । नेपालमा वि.सं. २००८ साल माघ २१ गते तत्कालीन प्र.म. मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरबाट सर्वप्रथम बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यही वर्षदेखि हरेक आर्थिक वर्षको आय व्यको अनुमान सहितको बजेट प्रस्तुत हुँदै आएको छ। सुरुवाती समयमा बजेट राजपरिवार भित्रमै सीमित हुने गर्थ्यो। पहिलो बजेटको आकार जम्मा जम्मी ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ थियो। २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि मात्रै जनप्रतिनिधिका बिचमा बजेट सार्वजनिक गर्न थालिएको हो। उक्त वर्ष देखिनै बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्न थालिएको हो।
शनिवार प्रस्तुत हुने बजेट ७५ औ बजेट हो। बजेट प्रस्तुत गर्न थालेको वर्षलाई गणना गर्ने हो भने २००८ साल देखि ७८ साल सम्म ७० वर्ष हुन्छ। तर यो बजेट भने ७५ औ बजेट हो। कुनै वर्ष वर्षमा दुई पटक सम्म बजेट आएका कारण यो ७५ औ बजेट हुन गएको हो।